WAR DEG DEG AH:LABA WASIIR OO ISKA CASILAY XUKUUMADII UU SHALAY MAGACAABAY C/RASHIID SHARMARKE | Toggaherer's Weblog
Djibouti 21 Feb 2009 ToggaHererMudane C/waaxid Cilmi Goonjeex oo loo magacaabay R/wasaare ku xigeen iyo wasiirka Tamarta iyo Shidaalka iyo Cabdulaahi Axmad Cabdulle Azhari oo loo magacaabey Wasiirka Jaaliyadaha ayaa xilkii iska casilay.
Djibouti 21 Feb 2009 ToggaHerer
Ilo lagu kalsoon yahay oo ku sugan dalka Jabuuti ayaa ku soo waramaya in Mudane C/waaxid Cilmi Goonjeex oo loo magacaabay R/wasaare ku xigeen iyo wasiirka Tamarta iyo Shidaalka uu xilkii iska casilay.
Wasiirka oo dhalasho ahaan ka soo jeeda beesha Mareexaan ayaa wararku sheegayaan in markii uu soo baxay liiska magacaabidda golaha wasiirka uu kulan kula qaatay Jabuuti xildhibaanada beesha SADE iyo Odayaasha Dhaqanka kadibna la isku afgartay inuu xilka iska casilo.
Kulan ay yeesheen xildhibaanada, waxgaradka iyo aqoon yahanka ayey ku qaadeceen magacaabista xilkaa, waxaana ay sheegeen xukuumadda la magacaabay ay tahay mid aan cadaalad aheyn sida ay hadalka u dhigeen.
Geesta kale isana Waxaa ka cududaartay kuna gacan saydhay.Cabdulaahi Axmad Cabdulle Azhari oo loo magacaabey Wasiirka Jaaliyadaha oo aan aheyn wasaarad aan jirin loona baahneyn in la sameeyo .
Waxaana la filayaa in Azhari iyo GoonJeex ay Saacadaha soo socda ay shir jaraaid ku qabtaan Magaalada Jabuuti halkaasna ay ka cadeeyaa mowqifkooda ku aadan Wasaaradahan loo magacaabay iyo tan Xukuumada R/Wasaare Sharmaarke.
Warqabadka ToggaHerer Moqdisho